Nahafapo tamin’ny ankapobeny hoy ireo mpandraharaha saingy maro hatrany ny olana mbola sedraina. Ohatra amin’izany ny mbola tsy fahafantaran’ny firenena vahiny maro ny fandraharahana sy ny vokatra misy eto Madagasikara. Rehefa amin’ny hetsika sahala amin’itony dia tokony efa mba mazavazava amin’ireo mpandraharaha vahiny ny zava-misy sy ny vokatra mampiavaka an’I Madagasikara. Anisan’ny firenena mbola tsy mahafantatra tsara mahakasika ny fandraharahana sy ny famokarana eto Madagasikara izao ohatra ny kanadiana izay nandray anjara tamin’ny hetsika. Na izany aza dia nampiavaka ity andiany ity ny fandraisan’ireo firenena vahiny maro anjara ka hita teny ny Alemana, Egypta ary ny Belza. Mbola mampitaraina ny mpandraharaha mpanondrana entana Malagasy hatrany kosa ny fahasarotan’ ny fiarovana ny tsena eto Madagasikara nohon’ny tsy fisian’ny sivana tahaka ny any amin’ireo firenena any ivelany amin’ny fampidirana ny vokatra miditra